Sir la dusiyay: Hantida boqoradda Ingiriiska oo si qarsoodi ah dibadda loogu maalgaliyay - BBC News Somali
Sir la dusiyay: Hantida boqoradda Ingiriiska oo si qarsoodi ah dibadda loogu maalgaliyay
Xigashada Sawirka, Image copyright
Warqado badan oo sir ah ayaa la dusiyay, waxayna shaaca ka qaadayaan sida dadka awoodda leh iyo hantiilayaasha ay si sir ah ugu maalgashadaan mashaariic qarsoodi ah si aysan canshuur u bixin.
Dadka ku xusan warqadaha waxaa ka mid ah boqoradda Ingiriiska, iyo mid ka mid ah xoghayayaasha maamulka Donald Trump.
Dukumiintiyada sirta oo loogu magacdaray "warqadaha jannada" waxay ka kooban yihiin 13.4 milyan. BBC Panorama ayaa qeyb ka ahayd 100 warbaahin oo baaritaan ku sameeyay warqadaha sirta ah ee la dusiyay.
Sidee boqoradda UK ugu lug leedahay?
Qiyaastii $13 milyan oo dollar oo ka mid ah dakhliga boqoradda ayaa maalgashi qarsoodi oo dibadda ah lagu sameeyay, sida ay muujinayaan warqadaha la dusiyay.
Shirkadda "The Duchy of Lancaster" oo boqoradda ay dhaqaale ka hesho ayaa lacag maalgashi ah ku bixisay jasiiradaha Ceyman iyo Bermuda.
Lacagtaas qeyb yar oo ka mid ah waxay gacanta u gashay shirkad lagu magacaabo BrightHouse, oo horay loogu eedeeyay in kireyta guryaha ay u sameeyaan si aan habooneyn.
'Ruushka oo adeegsaday Kaspersky si uu sir u xado'
Sidoo kale, waxaa maalgashiga qeyb ka helay shirkad kale oo lagu magacaabo Threshers, taas oo la sheegay in ay la dhuumatay canshuur gaareysa £17.5 milyan oo gini.
Shirkadda Duchy ayaa sheegtay in BrightHouse ay hadda leedahay £3,208 gini, aysanna qeyb ka ahayn go'aan maalgashi. Waxay intaa ku dartay in aysan war ka hayn meelaha la maalgeliyay.
Nin madax ka ah maalgashi gaaraya £500 milyan oo gini, Chris Adcock, ayaa BBC-da u sheegay: " Istaraatiijiyadeena maalgashi waxay ku saleysan tahay talada iyo soo jeedinta la taliyayaasheena, si sax ah ayaana hantida loogu maalgeliyaa."
"Shirkadda Duchy waxa keliya oo ay maalgelisaa shirkadaha sare ee gaarka loo leeyahay ka dib soo jeedinta lataliyayaasheena dhanka maalgashiga."
Afhayeenkan u hadlay shirkadda Duchy of Lancaster ayaa intaa ku daray: "Tiro maalgashiyo ayaan sameynay, qaar ka mid ahna caalamka ayey ku kala yaallaan. Dhammaan maalgashiyadeena si buuxda ayaa loo baaraa waana kuwo sharci ah."
"Boqoradda si iskeed ah ayey canshuur uga bixisaa dakhli kastoo ka soo gaara Duchy," ayuu yiri Chris Adcock.
Shirkadda Duchy oo sameysa dhaqaalaha ay hesho boqoradda UK, ayaa sheegtay in aysan warba u hayn in faa'ido canshuur ay ka heleyso maalgashiga dibadda, waxayna intaa raacisay in istiraatiijiyadda canshuurta aysan qeyb ka ahayn shuruucda maalgashiga.
Baaritaan qarsoodi ah oo loogu kuur galay qaabka wajiga looga saaro laalaabka